Soomaaliya oo Mareykanka ka Codsatay inuu ka Tageero dib u dhiska Ciidamada
You are at:Home»Warkii oo Dhan»Wararka»Soomaaliya oo Mareykanka ka Codsatay inuu ka Tageero dib u dhiska Ciidamada
Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda xilgaarsiinta Xasan Xuseen Xaaji ayaa Maanta kulan gaar ah la qaatay Saraakiil ka tirsan Taliska Ciidamada dowladda Mareykanka ee Soomaaliya.
Kulanka u dhexeeyay Wasiirka iyo Saraakiisha Ciidamada Mareykanka ayaa waxaa looga wada hadlay xoojinta xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya dowladdaha Soomaaliya iyo Mareykanka oo ku aadan dhinaca Ciidamada.
Sidoo kulanka ayaa inta uu socday waxaa looga arrinsaday sidii loo dardar-gelin lahaa howlgalada ka socda gudaha Soomaaliya iyo tababarada Mareykanka uu siiyo Ciidanka Xoogga dalka.
“Kulanka Wasiir Xasan Xuseen Xaaji iyo Saraakiisha Ciidamada Mareykanka ayaa ku qotomay Xoojinta Xiriirka Milatari ee Ka dhexeeya Soomaaliya iyo Mareykanka ,iyo Sidii loo dardargalin lahaa howlaha tababaridda iyo taageeridda mareylanka ay siiyaan CXDS” ayaa lagu yiri Qoraal kasoo baxaya Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda.
Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay ka mid tahay dowladdaha ka taageera dowladda Federaalka Soomaaliya tababarada dhinaca Ciidamada, waxaana xunid muran in Mareykanka uu ka qeyb qaato howlgalada ay fuliyaan Ciidanka dowladda.